अक्षय कुमार भन्छन्- कतिन्जेल कोरोनाको डरमा बस्न सक्नुहुन्छ ? - Yessamachar
अक्षय कुमार भन्छन्- कतिन्जेल कोरोनाको डरमा बस्न सक्नुहुन्छ ?
एजेन्सी । अभिनेता अक्षय कुमारले हामी कहिलेसम्म कोरोना भाइरसको डरले घरभित्रै बसिरहने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
महामारीबीच पनि लगातर चलचित्रको छायांकनमा फर्किंदा डर लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले हामी कहिलेसम्म डरमा बसिरहने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका हुन् । “पक्कै मलाई डर लागेको थियो, तर कतिन्जेल तपाईं डरमा बसिरहन सक्नुहुन्छ ? जब महामारी सुरु भयो मानिसहरु यसको असर बारे अनविज्ञ थिए त्यसैले डराउँथे । तर समयसँगै हामीलाई थाहा भयो कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भयो भने यसलाई हराउन सक्छौं । तसर्थ आफूलगायत सम्पूर्ण टिमको लागि सावधानी अपानाउँदै काममा फर्किन निधो गरेँ ।”
महामारीबीच छायांकनमा फर्किने र यसलाई निरन्तरता दिइरहने बलिउड अभिनेतामा अक्षय पहिलो हुन् । क्यामेराबाट यति लामो समयसम्म टाढा बसेको यो नै पहिलोपटक हो । जसका कारण काममा फर्किन निकै आतुर भइसकेका कारण सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै काममा फर्किहालेको अक्षयले बताए ।
अब पनि हात बाँधेर बसिरहने हो भने भाइरसले भन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै अक्षय भन्छन्, “यदि अहिले होइन भने कहिले त ? यो लकडाउनको समयमा हजारौं मानिसहरु बेरोजगार हुनुपर्‍यो । यदि हामी भ्याक्सिनको पखाइमा बसिराख्ने हो भने मानिसहरु भाइरसले भन्दा पनि बेरोजगारीको चपेटामा नराम्ररी फस्नेछन् । त्यसैले मलाई लाग्छ आवश्यक सावधानी र मास्क लगाएर हामी काममा फर्किनुपर्छ ।”
मे महिनामा कोरोनाबारे जनचेतनामूलक विज्ञापनबाट पुनः काममा फर्किएका उनी त्यसपछि भने निरन्तर एकपछि अर्को गर्दै छायांकनमै व्यस्त छन् । अक्षयले जुलाई महिनामा मात्रै १० दिनमा सातवटा विज्ञापनको छायांकन सकाइसकेका छन् । यो महिना उनी चलचित्र ‘बेलबटम’ का लागि लन्डन जाने तयारीमा छन् । त्यस्तै अक्टोबरबाट अर्को चलचित्र ‘अतरंगी रे’ को बाँकी छायांकनमा व्यस्त हुनेछन् ।
अक्षयले सोमबार रक्षाबन्धनका अवसरमा आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘रक्षा बन्धन’ निर्माणको घोषणा गरेका छन् ।
Previous articleप्रधानमन्त्रीले भने–गैर जिम्मेवारीपना हेर्नेभए नेकपामै हेरौँ
Next articleअमेरिकामा कोरोना भाइरस कमजोर भइरहेको छ : ट्रम्प